Umshini Wekhofi Othomathikhi
Umshini Wekhofi Othomathikhi Imigqa elula nenhle, imigqa ehlanzekile kanye nezinto ezisezingeni eliphakeme zigqiba ukwenza ukwakheka kwe-F11 kufanelana nezindawo ezisebenza kahle nezasekhaya. Umbukiso ophelele we-"7" wokuthinta kulula kakhulu ukusebenzisa futhi unembile. I-F11 ingumshini "owodwa" lapho ungaguqula khona iziphuzo zakho ozithandayo ukuze zikhethwe ngokushesha. I-hopper ebanzi enwetshiwe, ithangi lamanzi kanye nezitsha zesitsha kuyatholakala ukubhekana nehora eliphakeme kakhulu. Iyunithi lokuphisa elinelungelo lobunikazi linganikeza i-espresso ecindezelwe noma ikhofi ejwayelekile engenawo umfutho futhi iphunga liqinisekiswa amabala e-ceramic flat.
Idivaysi Yokuphepha Izinga eliphakeme lezinto zokwakha kanye nokulula kokuklama kwenza le divayisi yokuqashelwa kobuso bakho ibe yisitayela, isesitayeleni nokuqina. Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe ngaphakathi ukuze bukwenze kube ngesinye esisheshayo emhlabeni futhi bucace kakhulu, akekho ongakopela i-algorithm yayo. Umkhiqizo wobufakazi bamanzi onomkhathi uholele ukukhanya ohlangothini lwasemuva ukudala isimo esijwayelekile ngisho nasehhovisi elibandayo kakhulu. Usayizi we-compact uyenza ifanele cishe yonke indawo futhi ukuma kuyakuvumela ukuba kubekwe ngokuqondile noma ngokuqondile.
Sonto 29 Meyi 2022
Ukuveza Ifenisha Amakhaya akhula mancane, ngakho-ke adinga ifenisha engasindi. I-Dotdotdot.Frame uhlelo lokuqala lwefenisha ephathekayo neyenziwe ngezifiso emakethe. Ngempumelelo futhi icompact, ifreyimu ingafakwa odongeni noma ivumelane nayo ukuze ibekwe kalula ekhaya. Futhi ukwenza kwayo ngokwezifiso kuvela kwizimbobo ezingama-96 nobubanzi obukhulayo bezesekeli zokulungisa kuzo. Sebenzisa eyodwa noma ujoyine izinhlelo eziningi ndawonye njengoba kudingeka - kunenhlanganisela engapheli.
Uhlelo Lokuhlunga Kabusha Imfucuza Kabusha
Mgqibelo 28 Meyi 2022
Uhlelo Lokuhlunga Kabusha Imfucuza Kabusha I-Spider bin yisixazululo somhlaba wonke nesezomnotho sokuhlela izinto ezingase ziphinde zisebenze. Iqembu lemigqomo ye-pop-up lenzelwa ikhaya, ihhovisi noma ngaphandle. Into eyodwa inezingxenye ezimbili eziyisisekelo: ifreyimu nesikhwama. Ihanjiswa kalula ukusuka kwenye indawo iye kwenye, ilungele ukuthuthwa nokuyigcina, ngoba ingaflaza uma ingasebenzi. Abathengi bayala i-spider bin online lapho bengakhetha khona usayizi, inani le-Spider Bins nohlobo lwesikhwama ngokuya ngezidingo zabo.
Lwesihlanu 27 Meyi 2022
Lwesithathu 25 Meyi 2022
Wuhan Pixel Box Cinema Cinema Mgqibelo 25 Juni
Opx2 Ukufakwa Kwe-Optic Lwesihlanu 24 Juni
Vivit Collection Amacici Nendandatho Lwesine 23 Juni
Trolley Umshini Wekhofi Othomathikhi Idivaysi Yokuphepha Ukuveza Ifenisha Uhlelo Lokuhlunga Kabusha Imfucuza Kabusha Isinamoni Roll Noju